TSY FISIAN’NY DEMOKRASIA : Mitohy hatrany ny antsojay mahazo ireo mpiara-dia amin’i Andry Rajoelina
Nandritra ity fitondrana mijoro ankehitriny ity dia saika lasibatra noho ny antsojay nataon’ny mpitondra ireo mpiara-dia amin’ny filohan’ny tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina. 11 décembre 2017
Raha tsiahivina dia anisany niharan’ny fanenjehana mivaivay ny loholona Lylison izay nolazaina fa mpanakorontana firenena ary nisy mihitsy aza tamin’izany fotoana no sahy nilaza fa mpampihorohoro ny tenany. Tsy azo hadinoina ihany koa ny fampidirana am-ponja ny minisitra teo aloha, Augustin Andriamananoro ary teny am-pandevenana ny fianakaviany izy no nosamborina tsy nananana antra. Ity farany dia noampangaina fa nitari-bahoaka hikorontana hatrany.
Amin’izao fotoana izao indray dia tovolahy iray antsoina hoe Stephano, mpikambana ao anatin’ny fikambanana Cs-Anr izay miara-dia sy manohana an’i Andry Rajoelina no nidoboka am-ponja vonjimaika rehefa niakatra fitsarana ny faran’ny herinandro lasa teo. Araka ny vaovao voaray dia fanehoan-kevitra mahakasika ny raharaham-pirenena tao anatin’ny tambajotra sosialy “facebook” no nahatonga ny fanenjehana azy ka niafara tamin’izao fampidirana azy am-ponja izao.
Dradradradraina anefa fa firenena mandala ny demokrasia noho ny fahafahana maheno hevitra ny eto Madagasikara. Raha ny zava-misy iainan’ny vahoaka anefa toa mifanohitra amin’izany tanteraka. Raha misy ireo maneho ny heviny ka tsy mifanaraka amin’ny an’ny fitondram-panjakana dia iharan’ny fandrahonana sy ny ramatahora tahaka izao. Tao anatin’ny fandaharana fotoam-bita dia nilaza ny Filoham-pirenena fa malalaka tsara ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara saingy raha misy kosa ireo minia manakorontana ny filaminam-bahoaka dia tsy maintsy ampiharina aminy ny lalàna.
Mampametra-panontaniana izany satria ny fanehoan-kevitra mahakasika ny tsy fahombiazam-pitantanan’ny mpitondra ve izany midika fa manakorontana saim-bahoaka, tsy misy mahazo maneho ny alahelony amin’ny zava-misy iainan’ny firenena ankehitriny izany. Fantatra moa fa efa maro ireo nampanantsoina nanaovana fanadihadiana teny anivon’ny mpitandro filaminana mahakasika ity fitsikerana ny mpitondra tao anatin’ny tambajotra sosialy ity ary nisy tamin’izy ireo aza no naiditra am-ponja avy hatrany.